Matambudziko matsva eApple Watch uye vashandisi veNike + Run Club | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch inoitirwa kuti vashandisi vafambe zvishoma zvishoma (kunyange hazvo chisiri chinhu chakakosha kuti uve newachi) uye ndeyekuti mhete dzinouya mumhando dzese dzinobvumidza muridzi wayo zvakafanana "Ruma" mune ichi chiitiko chemuviri.
Ipapo isu tine imwe vhezheni yakanyanya kutarisisa kune vatambi kana isu tinogona kana kutaura vanofarira kubva kuNike femu, iyo inopawo chinetso munharaunda yeNike + Run Club munharaunda uye yakatarwa Nike mharidzo dzakagadzirirwa chaizvo iyi Apple Watch modhi. Zvino vashandisi ava vanewo dambudziko rekutikurudzira kumhanya makiromita gumi neshanu kwevhiki kana kusvika makiromita makumi mashanu pamwedzi.
Nike + Run kirabhu app. Iye akakwana anomhanya mudiwa
Wakangotanga kumhanya here? Wakatotadza kurasikirwa nemarathoni ako? Hazvina basa, Iyo Nike + Run Club app ndizvo zvese zvaunoda kuti uvandudze iwe. Nekukurudzira kwemamiriyoni evamhanyi uye zano rehunyanzvi rinogara riripo, iwe uchaenderera kumberi nekukurumidza. Aya marudzi ematambudziko akanyatso tariswa kune vatambi uye isu tinowana inonakidza nhau mune iyi nyowani vhezheni 5.13.0 yeNike + Run Kirabhu:
Zvinetso zvitsva zvinowedzerwa senge zvataurwa pakutanga. Ramba wakurudzirwa uye zvipikise pachako kuti umhanye makiromita gumi nemashanu pasvondo kana makumi mashanu emakiromita pamwedzi uye enzanisa zvawanikwa nenharaunda yepasi rese yeNike inomhanya. Iwe unogona kuwana zvinofadza zvitsva kubudirira nedambudziko rega rega. Zvakare, teerera kune akakosha Nike Matambudziko. Enda ujoine imwe nhasi
Iyo inobvumidza kuona kurova kwemoyo nenzira yakapfava mumujaho, kune izvi tinotsvedza kuruboshwe pane wachi uye kumisa «All parameter»
Chekupedzisira, nhau dziri mushanduro iyi nyowani ndedze kugadzirisa zvikanganiso uye Wedzera app zvinowedzera zve iPhone uye Apple Watch. Chinhu chakakosha mushanduro nyowani idzi ndechekuti matambudziko anoramba aripo nemazvo kuitira kuti avo vanotanga nemutambo vakwanise kusangana navo uye kuti avo vakagwinya vanowanawo mugove wavo wekufara. Iko kunyorera kunozogadziridza otomatiki uye isu tinofanirwa kunge tiri paWatchOS 4.2 kana yakakwira kuisa ino app.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvinetso zvitsva zvevashandisi veApple Watch neNike + Run Club
Chii chinonzi Network Utility muMacOS?